I-Rustic Bunkhouse yi-Elm Lake
Yonwabela ubomi bechibi ngale ndlu intle ibekwe e-Elm Lake e-SD. Ngegumbi lokuhlala, i-king suite, ikhitshi eligcweleyo, indawo yokutyela kunye neyokuhlala, le ndawo inabo bonke ubutofotofo bekhaya. Vula unyaka wonke ngofikelelo olulula, oku kuya kukhawuleza kube yindawo yakho yeholide.
Ungathanda ukuzisa elakho ikhaya ngamavili? Sibuze malunga neenkampu zethu!
Le ndawo iyingqayizivele kwi-rustic decor yayo, izibonelelo ezininzi kunye neendawo zokuhlala eziphezulu. Ngendawo yayo efanelekileyo kunye noluntu oluzolileyo, indawo yakho yokubuyela ekhefini ayizange ibukeke ilungile.
Le ndawo ithule kwaye ipholile ibekwe e-Elm Lake, SD, ngaphaya nje komgca we-ND welizwe. Ngamakhaya onyaka kunye namaxesha asisigxina, le ndawo ikwalikhaya le-Elm Lake Resort, engaphaya kwendlela. Ukuqubha, ukuloba, ukukhwela isikhephe kunye neminye imisebenzi yasemanzini zizinto eziqhelekileyo zokuzonwabisa e-Elm Lake. Ezi ndawo zokuhlala zifumaneka kwimizuzu nje ukusuka eForbes nase-Ellendale e-ND naseFrederick, SD, isenza le ndawo ibe yindawo efanelekileyo yokurhoxa, kude nobuphithiphithi bobomi.
Uya kuba nendawo ye-bunkhouse ngokwakho! Umntu uzakudibana nawe akubonise xa ufika. Ngexesha lokuhlala kwakho abanini baya kufumaneka nokuba kumakhaya abo abekwe ngaphaya kwendlela okanye ngeselfowuni. Ungaqhagamshelana nabanini okanye umphathi nangaliphi na ixesha.
Uya kuba nendawo ye-bunkhouse ngokwakho! Umntu uzakudibana nawe akubonise xa ufika. Ngexesha lokuhlala kwakho abanini baya kufumaneka nokuba kumakhaya abo abekwe ngaphaya kwendlela…